आम्दानीको दरिलो स्रोत बनेका यी डर लाग्दा सर्पहरु ! – purnakhabar.com
Banner News समाचार समाज
आम्दानीको दरिलो स्रोत बनेका यी डर लाग्दा सर्पहरु !
सर्प भन्ने बित्तिकै जो कसैलाई पनि डर लाग्नु स्वभाविक हो । तर कतिपय यस्ता मान्छे छन् जो सर्पलाई नै साथी मात्र मान्दैनन् सर्पकै खेला देखाएर आम्दानी पनि गर्छन् । यस्तै एउटा घटना भएको छ इन्डोनेसियामा । यहाँ बसोबास गर्ने २२ बर्षिया एक युवकले दुई वटा कोब्रा (सर्प) लाई हातमा लिएर दर्शकलाई चटक देखाउँदै आएका छन् ।
जाइन्ट कोब्रा नामक उक्त सर्पहरु १३ फिट लामा थिए भने एउटा हात्तीलाई एक गाँसमै निल्न सक्ने क्षमता भएका थिए । यस्ता निडर व्यक्तीको नाम भने रोनी कुरनिवान रहेको छ । उनले उक्त सर्पलाई हातमा रिंगाउने, मुखमा चप्पी खुवाउने, काँधमा बोक्ने लगायतका चटक देखाएर दर्शकहरुलाई चकित बनाएका थिए ।
यो इन्डोनेसियाको सत्य घटना हो । यस्ता खालका कोब्रा १८ फिट सम्म पनि लम्बाई भएका हुन्छन भने जंगलमा २० वर्ष सम्म पनि जिवित रहन सक्छन । इन्डोनेसियाको एक पत्रिकामा उल्लेख भए अनुसार सर्प समात्ने क्रममा रोनीलाई चोट लागेको थियो र उनले अहिले घाउसँग सम्बन्धित उपचार गरिरहेका छन् । उनले सर्प समातेका तस्विरहरु सामाजिक सन्जालमा राख्दा उनका दर्शकको संख्या ८ लाख भन्दा बढि पुगेको थियो ।-एजेन्सी
वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता कीम जोङ अनसँगको वार्ता अर्को महिना हुने अमेरिकी मध्यावधि चुनावपछि गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकी सिनेटको मध्यावधि चुनावका लागि आजभोलि प्रचारप्रसारमा देश दौडाहामा छन् । चुनावअघि वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको ट्रम्पले बताए । संयुक्तराज्य अमेरिकाका केही राज्यमा आगामी नोभेम्बर महिनामा सिनेटका लागि मध्यावधि चुनाव […]
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ ०३ पैसा रहेको छ । यस्तै विक्रिदर ११४ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ ।यसैगरी युरो एकको खरिददर १२९ रुपैयाँ ७२ पैसा र विक्रिदर १३० रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ । यसैगरी अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८२ रुपैयाँ ४५ पैसा […]
स्कुटर ठोक्किँदा एक युवतीको मृत्यु
नवलपरासी – पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटमा गए राति दुर्घटनामा परी एक युवतीको मृत्यु भएको छ । गौँडाकोट–२ भृकुटी चोकमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना१८प १२४६ नं को स्कुटर र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना४१प २६७५ नं को स्कुटर एकापसमा ठोक्किँदा सो दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी ना४१प २६७५ नं को स्कुटर चालक चितवन गुञ्जनगर–४ का […]